fanontaniana Salama daholo
1 taona 2 volana lasa izay #1006 by cunnah37
Hi Chris aho avy any Blackpool aho, nahasambotra nandritra ny taona maro. Nanomboka tamin'ny fs98 ary efa mandroso hatrany amin'ny fihodinana faharoa. Vao haingana dia nifindra tany amin'ny FSX rehefa nahazo PC vaovao izay afaka namoaka azy tsara. Ankafizo ny sidina haingana indrindra satria tsy manam-potoana ho an'ny fotoana lava kokoa aho. Nahita ity tranokala ity hikaroka takelaka momba ny fiaramanidina vitsivitsy ary toa ny fampiasana mora foana ao amin'ny lisitra ankafiziko.
Fotoana mamorona pejy: 0.214 segondra